Krita 4.4.3 inouya chaizvo kugadzirisa bugs | Linux Vakapindwa muropa
Krita 4.4.3 yasvika senge vhezheni yakaburitswa zvakanyanya kugadzirisa bugs
Pakati paNdira, KDE yakakanda v4.4.2 yechishandiso chayo chakagadzirwa nevevanyori vemifananidzo uye vakaunza maturusi matsva nemafuta, pakati pezvimwe zvinhu. Nhasi, inopfuura chete mwedzi miviri gare gare, izvo zvavakaita kuburitsa imwe yeaya madiki kana pasina chinonakidza chinogadziridzwa, a Krita 4.4.3 iyo yakaburitswa chete uye chete kugadzirisa bugs. Asi kuti hazvinakidze hazvireve kuti hazvina kukosha, nekuti ndizvo chaizvo shanduro idzi dzinoita kuti zvese zvakabatanidzwa munguva yakapfuura zvive zvakavimbika uye zvigadzikane.
Sezvatinoverenga mu kusunungura chinyorwa, Krita 4.4.3 inosanganisira kugadzikana uye kugadzirisa mashandiro, uye inozviita pane ese masisitimu ayo aripo, kusanganisira Android uye macOS. Havataure chinhu chimwe chete chitsva; chinenge chinhu chese pane runyorwa rwezvinhu zvitsva zvaunazvo pazasi zvinosanganisira izwi rekuti "Gadzirisa" (gadziriso). Naizvozvo, zvakakodzera kuti uvandudze nekuti zvese zvichave zvirinani, asi tichifunga kuti isu hatichakwanise kuita chero chinhu chitsva.
Chii chitsva muKrita 4.4.3
Iyo haisisiri yakaturikwa kana bhatani rekumashure rakadzvanywa pahwindo repamba.
Yakagadziriswa kupaza kana kurodha mafaera apo application ichiri kutanga.
Shandisa lastUpdateTime kuteedzera zvinhu.
Ipa inomiririra inoshanda nziraPattern.
Yakagadzirisa iyo picker yemuvara inovhara iyo skrini yese.
Zvirongwa zvakachengetedzwa zvakatotakurwa mushure mekutanga zvekare.
Makiyi mabasa anogona ikozvino kuwedzerwa kune psd_layer_effects_shadow_base.
Yakagadziriswa kurodha patsva kwemushandisi kupinza mapakeji presets.
Yakagadziriswa halftone firita yekuparara nekuda kwekusashanda kwe pointer.
Fixed crash paunoshandisa zvakare firiji nekugadzirisa zvakare.
Yakagadziriswa kupunzika kana kupenda pane firifi mask yakagadzirwa kubva kusarudzo ye vector.
macOS: Akagadziriswa ekutsvaga enjini plugins kuratidza thumbnail kana kukurumidza kufanoona.
Kunyora: kubata kwemagero mireza kwakagadziriswa.
Kugadzikana uye kuita:
Gadzirisa zoom level sync pakati pevasvas uye notibhuku.
Yakagadziriswa yakajairwa mu Smart Patch Turu.
Yakagadziriswa nyaya dzekuita kumberi / kumberi bhatani bhatani.
Yakagadziriswa kuchengetedza inowedzera yekuwedzera backups.
Yakagadzirisa nyaya uko notepad yacho isingateereri.
Yakagadziriswa kara seAlpha uye chengeta alpha pane clipboard uye tsika mabrashi.
Yakagadziriswa RGBA_brushes package kuti Krita irege kuyedza kuitazve pakutanga.
Yakagadziriswa kubata kwechitaera muKisAngleSelector apo iyo flip bhokisi inofanira kuratidzwa yakati sandara uye shandisa iyo nyowani yekusarudza kona kwese
Krita 4.4.3 ikozvino yawanikwa kubva kune yepamutemo webhusaiti, iyo yatinogona kuwana kubva Iyi link. Kubva ipapo, vashandisi veLinux vanogona kurodha yavo AppImage, uye vanotipawo repository yekuwedzera kuUbuntu-based distributions. Iyo app yacho inowanikwawo sehombodo Flatpak y Snap, asi panguva ino zvese zviri zviviri zviri muv4.4.2 yeiyo software.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Krita 4.4.3 yasvika senge vhezheni yakaburitswa zvakanyanya kugadzirisa bugs
GNOME 3.38.5 inosvika nekubata kwekupedzisira uye inogadzirira iyo GNOME 40 kumhara
Microsoft Edge yeLinux yatobvumidza kuwiriranisa pakati pemabhurawuza